Macluumaadka luqada Finnishka iyo Iswidishka - InfoFinland
Nolosha Finland > Luqada Finnishka iyo Iswidishka > Macluumaadka luqada Finnishka iyo Iswidishka
Finland waa dal laba luqadoodle ah
Finland waxaa ka jira laba luqadood oo dowli ah, Finnish iyo Iswidish. Luqadahaan waxay dhaxal fog ku leeyihiin Finland. Afka Finnishka waxaa luqad hooyo ahaan ugu hadla boqolkiiba 87, Iswidishka waxaa luqad hooyo ahaan ugu hadla qiyaastii boqolkiiba 5 oo dadka Finnishka ah. Luqadahaan kii aad doonto ayaad isticmaali kartaa marka aad arrimo ka fushaneyso saraakiisha dowladda, tusaale ahaan xafiiska shaqada (työ- ja elinkeinotoimisto).
Afka Iswidishka waxaa looga hadlaa intiisa badan galbeedka iyo xeebta koonfureed ee Finland. Dhowr degmo waxaa afka Iswidishka looga hadlaa si ka badan luqada Finnishka. Hubi luqada guud ee degmadaada.
Degmooyinku waxay noqon karaan kuwa laba luqadle ama hal luqadle ah. Haddii degmadu ay laba luqadle tahay waxaad isticmaali kartaa Finnishka ama Iswidshka marka aad arrimo ka fushaneyso shaqaalaha degmada, tusaale ahaan xafiiska sooshaalka (sosiaalitoimisto).
Shaqooyinka qaar waa inaad afka Finnishka iyo Iswidishka taqaanaa.
Dugsiyada Finnishka waxaa lagu bartaa afka Finnishka iyo Iswidhishka. Afka Finnishka iyo afka Iswidishku waa maadooyin qasab ah marka la dhiganayo iskuulaadka Finnishka. Ardayda afkooda hooyo uu Finnish yahay waxay iskuulka ku bartaan afka Iswidishka. Ardayada afkooda hooyo uu Iswidish yahay waxay iskuulka ku bartaa afka Finnishka.
Haddii cunugga dalka u soo guuray uu ku jiro iskuulka wax lagu barto luqadda Finnishka wuxuu isna ardayda kale ee luqadoodu Finnishka tahay la baranayaa Iswdishka.
Waa noocee luqada Finnishku?
Afka Finnishku waa luqada Finnish-Ungari. Luqadaha la ehelka ah waa tusaale ahaan Istooni iyo Ungari. Luqada Finnishka waxaa ku jira dhalan rogyo badan, tusaale ahaan boosaska magacyada, ficilada qaab qofeedka iyo xilliyada. Meeleeyayaashu waa ka yar yihiin tusaale ahaan luqada Indo-Yurub. Luqada Finnishka waxaa ku jira ereyada ka daba mara ereyga ay u taliyaan. Hababka ereyadu isugu xigaan marka luqado badan loo fiiriyo waa ka salaxan yihiin. Finnishka waxaa ku jira erayo badan oo laga soo amaahday tusaale ahaan Iswidhiska, Jarmalka, Ruushka iyo Ingiriiska.
Habka dhawaaqa ee luqada Finnishku waa mid si fiican loo sugay. Carab ku dhejinta eryadu mar walba waa higaada qeybta hore ee ereyga.
Finland sida badan dadka ”adiga” ayaa loogu yeeraa. Marmarka qaar ”adinka” in loogu yeero qofka waa xushmad. Tusaale ahaan inta badan macaamilka waayeelka ah waxaa loogu yeeraa ”idinka”.
Waa noocee luqada Iswidishku?
Iswidishku waa luqad Indo-Yurub, waxay ku abtirsataa luqadaha waqooyi ee Jermaanic loo yaqaan. Luqadaha la ehelka ah waa tusaale ahaan, Norwjijaanka, Danishka iyo Jarmalka. Isiwidishka waxaa ku jira erayo badan oo laga soo amaahday tusaale ahaan faransiiska.
Ficilada luqada iswidishku waxay isu bedelaan waqtiyo kala duduwan. Magac-u-yaaladu waxay u qeybsamaan laba isir. Fal-sifeeyayaashu waxay isla bedelaan isirida.
Afka Iswidishka waxaa la isticmaa meeleeyayaal badan, hababka ereyadanu waa kuwa aad loo dejiyay.
Iswidishka looga hadlo Finland waxaa loogu yeeraa Iswidishka Finland. Habka loogu dhawaaqo waa mid ka yara duwan Iswidishka looga hadlo Sweden. Dhawaaqa Iswidishku waa mid dejisan.
Luqadaha dalka ee laga tirada badan yahay
Finnishka iyo Iswidishka ka sokoow luqado kale ayaa looga hadlaa Finland.
Luqadaha sami waa luqadaha asalka ah ee Finland. Finland waxaa looga hadlaa saddex luqadood oo sami ah. Waxay ku abtirsadaan luqadaha Finnish-Ungari.
Luqada Romaaniga ee Finland waxay ku abtirsataa luqadaha Indo-Yurub.
Finland waxay leedahay sidoo kale luqad dhegoolayaasha oo u gaar ah.
Macluumaad ku saabsan luqadaha waxaad ka heleysaa bogagga xarunta baaritaanka luqadaha dalka.
Macluumaad ku saabsan luqada FinnishkaFinnish | Iswidish
Macluumaad ku saabsan luqada IswidishkaFinnish | Iswidish
Macluumaad ku saabsan luqada SamiFinnish | Iswidish
Macluumaad ku saabsan luqada Roomaaniga FinlandFinnish
Macluumaad ku saabsan luqada Finnishka ee dhegoolahaFinnish | Iswidish
Qaamuuska internetka ku jira ee luqada dhegoolaha ee FinnishkaFinnish
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 05.02.2021 Boggan war-celin ka soo dir